I-stylish iyona mhlobiso oyintloko wowesifazane. Ngaloo nto, iimpazamo zobuso, intloko, intamo, njl. Zifihliwe.
Naliphi na umntu onoluhlobo oluthile lomntu unokufumana nayiphi na impazamo esuka kwimoko efanelekileyo yobuso. Ingaba yimpumlo ende okanye imincinci kakhulu, ingcongolo ye-snub, intamo ende emfutshane okanye enomzimba omncinci, iimpawu ezinkulu, ubuso obuphantsi okanye obuphezulu, isikhulu esinzima. Ukugqithisa okanye ukunciphisa ukungaphumeleli okunjalo kungenziwa kunye nokulungiswa kobuso beenwele, oko kukuthi, inwele yekhanda ekhethiweyo.
Ubuso obunemifanekiso emikhulu kunye ne-chin ehamba phambili, mhlawumbi, ukulungisa i-hairstyle epholileyo, iinkcukacha ezisisiseko ezikhutshwe ebusweni.
Musa ukushiya iindlebe zakho, ngenxa yokuba le ngxowa yandisa inxalenye engaphantsi yobuso, iqhosha elinzima kunye neempumlo eziphazamisayo zihanjiswa ngaphambili.
Ukuba unempumlo ende, andiyikucebisa ukuba ubenzi bezinwele kunye neenwele ezisezantsi. Iphunga elide liza kufihla intloko yeenwele kunye neengqungquthela ezijoliswe ebusweni. Ukuba wenza isahlukaniso, kungcono ukwenza i-oblique, kuba isisombululo esicacileyo sinika umlinganiso womntu, kwaye ukulinganisa kugxininisa ukungaphumeleli.
Ukuze umntu onentamo emfutshane, i-hairstyle iphakanyiswayo eyenza ukukhohlisa kwentamo ende. Ukwenza oku, iinwele entanyeni zinqunywe ngesimo se-mousel esilwelisiweyo okanye zidibaniswe ngasemva kwentloko. Kulo hlobo lomntu, olufutshane kakhulu lokunciphisa izinwele alukhuthazwa.
Umbuso ophezulu, kunye nezantsi, kufuphi nebhekoni. Le yindlela ephezulu kakhulu neyendlela. Zonke iinwele zidibaniswe ebusweni, zivula. Umthi kufuneka ube luninzi, ubude, bunzima.
Ibunzi eliphantsi, ngokuchaseneyo, livaliwe nge-bun e mfutshane, ukuba iya kuluhlula umgca wokukhula kweenwele ebunzini. Kuyinto enqwenelekayo ukubeka iinwele kunye neenwele ezinjalo zomeleleyo ukusuka kwi-bangs, ukuze ziqhubeke nomgca webunzi. Iindlebe zilungele ukuvula. Ukuba awukhethanga ama-bangs, ngoko ke ukungabikho kwesikhundla sebunzi kunokufihla "icocoon". Izinwele ze-haircuts azinqwenelekayo, apho inxalenye engezantsi inkulu kwaye ibanzi ngaphezu kweyona ephezulu.
Kuba umntu onomphunga we-snub, iinqwelomoya ezinqwenelekayo zinconywa kwizinwele ezingekho ngaphezu kwendlebe yeendlebe, iingcebiso zeenwele kufuneka zikhonjiswe phezulu. I-hairstyle echanekileyo kunye nokuziphatha okungalunganga kweengqungquthela zeenwele ngokugqithiseleyo kugxininisa ukungaphumeleli kobuso bakho, kunye nezakhe zezinwele ezigubungela iindlebe zakho nazo azikhuthazwa. Kwaye okugqibela: ukhetha iinwele, kufuneka kwakhona uqikelele ukuphakama nokuma kwakho.
Abasetyhini abanokukhula okuphezulu abayi kuhambelana nokuphakamileyo okanye bangabetheli kakuhle, njengokuba kuzo zombini iimeko ukukhula kuza kubonakala kuphakamileyo. Akwacetyiswa kwakhona ukuba azinqwenela izinwele okanye iincinci "ezininzi" ezide kakhulu, zikhululiwe ngasemva - kunye nale nani lide lide. Andiyikucetyiswa ukuqinisa iintloko ngokukhawuleza, umthamo wekhanda uyancipha, kwaye njengoko kunjalo, ukukhula kukhula. Kungcono kubafazi abanokukhula - iinwele ezibude obude .
Abafazi abanokuphakama obude bezinwele kunye neenwele eziphakathi okanye ezide, kunye neenwele. Abafazi abancinci abasayi kubazame - benze i-hairstyle yevolumu, ngenxa yoko, ubukhulu bomfanekiso buya kuphulwa kwaye loo ntokazi iya kubonakala ingenangqiqo. Ziyakulungelelanisa amaqhina kunye nezikhwebu zeenwele ezinde, ezivula intamo entle.
Ibhinqa elinobumba obuthathaka kunye nentloko yobuncinci abancinci abakwazi ukugqoka iinwele zokubamba iinwele, kuba oku kuya kunciphisa umthamo womfanekiso. Isitayela esifanelekileyo seenwele sinomthamo ophakathi.
Ukunciphisa izinwele ezimfutshane, kunye neenwele ezibophelelwe ngokunyanzelekayo akukhuthazwa kwaye zigqithise, zizele ngabasetyhini, ngenxa yelibubububububububububuhlu behlise ubungakanani bentloko, kunye nemilinganiselo yomzimba ngokuchaseneyo, ukwanda. Ungakhange ubhekane nezobhenqo ezinqabileyo neziqinileyo, kungcono ukwenza uboya bezinwele ezintle ngamagagasi amakhulu.
Imiqondiso ye-phlebectomy, inkqubo yokusebenza kunye nokuvuselelwa emva kwayo
Iintlobo kunye neendlela zokusebenzisa abahlanjululwayo kwesikhumba somntu
Ndinokukwenza njani ngokukhawuleza ukuba amacwe ayenze
Ubomi bomntu ka-Irina Pegova: endleleni eya kulonwabo olutsha. Ifoto yomdlali omncinci kunye neenwele ezintsha
Amaqanda atsiweyo ngeSpanish